Ny androaniko | Fanajana | 2
[Fanajana ] 02 Mey, 2011 20:00
Veloma njy yonikafopl :'(
Tohina indray ny fo fa nilaozan'ny namana serasera/facebook dia i Ny Hasina Heritiana alias Yonikafopl.
Afaka ny fijaliany, vita ny hazakazany, handry am-piadanana izy !
Veloma akia neny a, veloma any amin'i Shoan fa efa hifankahita ianareo izao.
Isan'ny havanana teo amin'ny asasoratra izy, ankoatr'ireo tsikiny nameno ny pejiny ao amin'ny facebook. Ity misy tononkalony iray isan'ny nahafinaritra ahy noraiketiny ao amin'ny pejin'ny serasera :
Indray andro any,
Raha sendra ka tomany,
Dia antsoy aho,
Tsy mampanantena aho anefa,
ny hanome tambitamby,
Fa ny azoko atao,
De hiaraka aminao,
Indray andro any.
Raha toa ianao te handeha,
any lavitra any,
Tsy hataoko anefa
Ny hitazona anao,
Fa hiaraka aminao aho,
Hizotra iny lalana iny.
Raha toa indray andro any,
Miantso ahy ianao,
Ka tsymisy valiny,
HEnonao tonga any,
Dia tongava haingana,
Fa mila anao aho,
Mila ilay teny mamy,
Miloatra avy eo imolotrao.
Misaotra an'i Hery nampahatsiaro azy toa izao :
Very namana iray indray ny serasera.
Tamin'ny 05/04/2004 i yonikafopl no nisoratra anarana tao amin'ny
serasera. Anisan'ny mpandray anjara mavitrika teto izy sy i akamatiana
zandriny tamin'izany fotoana izany, anisan'ny mpampiditra sary
matetika. Nisy fotoana izy narary mafy dia tsy afaka nandalo teo
amin'ny serasera nandritra ny fotoana maharitra. Namana vitsivitsy
ihany no nilazany ny aretiny. Taty aoriana dia niverina tsikelikely
indray izy ary hita ny herim-pony nandresy ilay aretina. Tsy tahaka ny
taloha intsony izy fa niova be ara-batana. Hitako hoe saika ni-se
laisser aller kely izy tamin'ny voalohany. Taty aoriana anefa dia
nivoatra tsikelikely ary hita indray hoe tapa-kevitra hiatrika ny
fiainana izy... niverina nifandray tamin'ny ankizy izy. Niverina
ni-tsaty tao amin'ny karajia efa ho isan'alina. Tamin'ny 2 avril teo
izy no nitsaty farany tao amin'ny karajia.
[Fanajana ] 03 Jolay, 2010 20:16
Veloma akia Shoan a !
Tiako ery mahatsiaro anjy toa izao. Misaotra tamin'izay rehetra niarahantsika hatrizay.
Tsy manadino anjy sy ireo andro sy alina lanintsika teto amin'ny tontolon'ny aterineto ikalamako.
Veloma njy la miss,
Roma, aogositra 2008
Bracciano (Roma), aogositra 2008
Giulianova, aogositra 2008
Roma, jiona 2009
Val de Reuil (Rouen), febroary 2010
Val de Reuil (Rouen), mey 2010
Paris sy Val de Reuil, nandritra ilay takariva nanehoana firaisam-po taminy, febroary 2010
[Fanajana ] 09 Martsa, 2010 19:01
Miroroa am-piadana Jean Gabin !